केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ? – Classic Khabar
केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ?
August 19, 2021 119
भनिन्छ,श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा ‘परालको आगो’ हो एकैछिनमा साम्य हुन्छ । तर, तीर्थबहादुर विक र भीममाया विक बीच त्यो कुरा लागु भएन । एकआपसमा पैदा भएको शं’कैशं’कामा हुने घरझ’गडाले सोमबार श्रीमान श्रीमतीले नै ज्या’न गु’मा’उनुप¥यो । उनीहरुका कान्छो छोरा सरोज भन्छन्,‘सामान्य कुरामा पनि आमा बुवाको पटक–पटक वि’वा’द भइरहन्थ्यो, यतिसम्म होला भन्ने सोचेका थिएनौं ।’
Prevउपचार गर्ने पैसा छैन’ भनेर प्रहरीलाई खबर गरेको केहि समयपछी प्रहरी घर पुग्दा दम्पतिकै भेटियो शव
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र ४ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल